ILoft emangalisayo eMelikana / iConsulate
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguMiriam & Felipe
Intle, ikhazimle kwaye iphangalele istudiyo sabucala / igumbi elinegumbi lokuhlambela labucala, A / C, ikhitshi eligcweleyo, indawo yokupaka yabucala kunye ne-intanethi.
Indawo egqwesileyo kwenye yezona ndawo zintle kwaye zixakekileyo esixekweni ngeentlobo ezahlukeneyo zeendawo zokutyela, iikhefi, iibhari njl.njl.
Ungasifumana iimitha ezingama-500 ukusuka kwi-General Consulate yase-United States, imizuzu eli-9 ukusuka kwi-Expo Guadalajara (i-3.9 km) kunye nemizuzu eyi-7 ukusuka kwiCathedral yaseGuadalajara (2.6km)
Le ndlu intsha ngokupheleleyo kwaye ikwiColonias Tower ene-elevator, ine-air conditioning, ibhedi enkulu, i-Smart TV, igumbi lokuhlambela labucala elinegumbi lokunxiba / ikhabhathi.
Igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlambela elinesiqingatha, ikhitshi elixhotyiswe, igumbi loncedo elinewasha / isomisi yindawo eqhelekileyo ebekwe kumgangatho we-5 wenqaba.
Indawo yethu yokuhlala inezinga eliphezulu elitofotofo xa kuthelekiswa nezinye iindawo zokuhlala kwindawo enezi mpawu, njengoko sikunikeza ukuba ukhethe okanye ungayikhethi inkonzo yomoya.
Apha, ukusetyenziswa kombane kuphezulu kakhulu kwaye ukuba ne-air conditioning iye yaba yinto yokunethezeka.
Ngethamsanqa imozulu esixekweni ikhululekile kakhulu (30-35 C ubuninzi phakathi 12 pm-04pm ehlotyeni) kwaye sibeka onawo fan, leyo kunye balcony entle idla ngokwaneleyo.
Nangona kunjalo sithanda ukucaca kakhulu malunga neenkonzo zethu.
Olu lwazi lufanayo luchazwe kwimimiselo yethu.
Njengoko ummiselo ukhankanya kakuhle, ixabiso le-air conditioning ngosuku yi-$ 150 yepesos yaseMexico, ehlawuliswa ngeqonga xa uceliwe ngaphambi kokufika kwakho.
Nayiphi na imibuzo esihlala sivuya ngayo ukuxhasa iindwendwe zethu kuyo yonke into abayifunayo, intuthuzelo yabo yinto ephambili yethu.
Indawo eselumelwaneni inazo zonke iintlobo zeendawo zokuzonwabisa ezinje ngeekhefi, iivenkile zokutyela, iibhari, indawo yokuzivocavoca, iivenkile ezithengisa iincwadi, iibhanki, iikhemesti, iivenkile ezizisebenzelayo.
Unokonwabela ukukhwela ibhayisekile kwiindlela zebhayisekile kwaye ngeCawa ungahamba ngendlela yokuzonwabisa kwaye wazi ngakumbi isixeko.
Ekufikeni kwakho siya kukubonelela ngesikhokelo kwezona ndawo zikufutshane zomdla ukuze sikuxhase ngexesha lotyelelo lwakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Miriam & Felipe
Amamos a México, nos encantan sus colores, arte, música y bailes. Nos gusta vacacionar con la familia y vivir experiencias bellas conociendo otros lugares de México y el mundo.
Siyakuthanda ukukhonza iindwendwe zethu ngokungathi zisekhaya, sifuna ukuba zikonwabele utyelelo lwazo ngokupheleleyo, apho sikhathalela ukubanika ezona ngcebiso zibalaseleyo kukhenketho, iindawo ezinomdla, iindawo zokutyela, njl.
Sisoloko sihoye kwaye sikwinkonzo yeendwendwe zethu.
Siyakuthanda ukukhonza iindwendwe zethu ngokungathi zisekhaya, sifuna ukuba zikonwabele utyelelo lwazo ngokupheleleyo, apho sikhathalela ukubanika ezona ngcebiso zibalaseleyo kukhe…
UMiriam & Felipe yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Guadalajara